Xanuunka dhanjafka oo dawo loo heli rabo - BBC News Somali
Xanuunka dhanjafka oo dawo loo heli rabo
Image caption Xanuunka dhanjafka ilaa iyo hadda wax dawo ah looma helin
Dhanjafku waa nooc madax xanuun oo qayb ka mid ah madaxa si gaar ah uu qofku u xanuuno. Xanuunkanna wuxuu ku badan yahay dumarka iyada oo cilmi baadhis cudurkan lagu sameeyey ay tilmaameysi shanti haween ahba mid ka mid ah iney xanuunkan qabto.
Xanuunkan qofka uu hayana shqada iyo wax weliba oo noolashiisa ka mid ah saameyn ayuu u geeysanayaa maadaamaa uu qofka uu hayo dagganaashaha uu ka luminayo, xanuunka uu qofka la kulmayana uu yahay mid aad u daran.
Dadaallada loo galay sidii cudurkan dawo rasmi ah looga heli lahaa ayaa ahaa mid aad u yar, sababa la xidhiidha kharashka faraha badan ee cilmibaadhayaasha kaga baxaya awgeed.
Lawren Sharkiy oo ka mid ah wariyeyaasha BBC ayaa waxay sheegeysaa "inuu xanuunkan uu ku billaawday xilli ay dugsi dare dhiganeysay. Marki ugu horreysay wuxuu igu billaabmay si fudud aniga oo marka uu xanuunkan i hayo dareemi jiray dagganaasha la'aan iyo caajis badan, ugu dambeeyntina wuxuu isku beddelaya madax xanuun aad u adag oo aan garan karin xanuunkiisa waxa aan ku tilmaamo."
cudur ka dhasha siksaan la'aanta
"Xanuunka dartii waxaan dareemi jiray kelinimo wuxuuna ugu dambeyntii i gaarsiiyey inaan shaqadaba isaga tago. Sanado badanna xanuunka wuu i hayaa oo waan la noolahay."
Ilaa iyo hadda lama garan waxa sababa xanuunkan Dhanjafka, dhakhaatiirtuna waxay ku guul darreysteen iney si buuxda u daweeyaan.
Hay'adda caafimaadka adduunka xog ay ka soo uruurisay 195 dal waxay tilmaameysaa inta u dhaxeysay 1990-ki ilaa iyo 2016-ki inuu Dhanjafka kaalinta labaad uu kaga jiray cudurrada jirka qofka waxyeellada ba'an u geysta.
Image caption Dhanjafka inta badan wuxuu haleela dumarka
Maxay tahay sababta uu dumarka ugu badan yahay?
Sababaha rasmiga ah oo Dhanjafku uu dumarka ugu badan yahay si rasmi ah looma ogaan.
Hase ahaatee, khubara ka tirsan jaamacadda Arizona cilmi baadhis ay sameeyeen iyaga oo Jiir u adeegsanaya, ayaa wuxuu kala duwanaashaha uu ka yimid marki ay saaynisyahannadu xaqiijiyeen maaddada loo yaqaanno "NHE1" uu ku yar yahay Jiirka dhaddigga ah, Jiirka Labka ahna uu aad ugu badan maaddada loo yaqaanno "Astrogen" taana ay sababi karto inuu Dhanjafku dumarka ku bato.
Maaddada "NHE1" haddii ay jirkeenna ku badneenna awoodda aan u yeelaneyno inaan cudurrada iska difaacno ayaa aad u yaraanaysa.
Cudur aanan la aqoon oo ku dhaca carruurta qaxootiga ku ah Sweden
Dhimashada ka dhalata AIDS-ka oo kala bar hoos u dhacday dunida
Xanuunka Dhanjafka inkasta oo dumarka ku badan yahay haddana cilmi baadhayaasha jaamacadda Arizona ka baxsan muunadda ugu badan waxaa ay ka qaadeen ragga.
Daraasad la sameeyey 2016-kii waxay tilmaameysaa dadka uu hayo xanuunka Dhanjafka marka la barbar dhigo dadka aan cudurka qabin iney seddex jibbaar murugta ugu nugul yihiin. dadka caajiska badanna seddex jibbaar waxaa haleelaya xanuunka Dhanjafka.
Daraasadda ay jaamacadda Arizona sameeysay waxay intaa ku dareysaa "Lixdi qof oo xanuunka Dhanjafka uu hayo mid ka mid ah inuu isku dayayo inuu isdilo." Xanuunkan oo dhibaatooyin caafimaad oo aad u badan dhaxalsiiyo maskaxda haddana ilaa iyo hadda wax dawo oo quman looma helin.
Image caption Sababta rasmiga ah ee keenta Dhanjafka lama garan
Ma laga yaabaa in xal kama dambeys ah loo helo xanuunkan?
Saaynisyahannada ku howlanaa cilmibaadhista xanuunkan Dhanjafka, waxay dhawaan soo saareen raja wanaagsan oo ay ka muujiyeen iney u helaan dawo si buuxda looga daweeyo cudurkan.
Dawada ay filayaan iney dhawaan soo saaraanna waxay ugu magac dareen "Erenba".
Dawadan cusub oo irbad ahaan lagu qaadanayo, qofka xanuunkan uu hayo wuxuu qaadanayaa bishiba halmar.
Dawada waxtarka ugu weyn ee ay leedahayna waxay khubaradu ku sheegeen iney tahay ka hortagga xanuunka Dhanjafka. Waxayna sheegeen cilmibaadhis ay sanado badan wadeen kaddib guusha ay ka gaareen iney cudurka dawo u helaan ay aad ugu farxsan yihiin balse ay uga sii farxad badan tahay boqollaalka milyan oo qof oo xanuunkan la ildaran.
Dawooyinka horay loo soo saari jireyna waxay dawadan kaga duwan tahay in looga tala galaya oo keli ah xanuunka Dhanjafka iney daweyso.
Waxayna cilmibaadhayaasha jaamacadda Arizona farrintooda ku soo afmeereen "waxaan hambalyo leennahay cid kasta oo uu xanuunkan hayo muddo aad u dhawna ha naga sugaan dawadaa cusub inaan soo garsiinno."